1aviagem- Amathiphu, izingxoxo, izindaba ezikhulunywe ngu-amateur wokuqala
UNossas Redes Sociais
ICosta Rica Izwe elenze kahle!
ICosta Rica, izwe elenze isinqumo esifanele! Ah! ICosta Rica, leli zwe ohambweni lwami lokuqala lapho langimangaza ngaphezu kwalokho ebengikulindele! Futhi yikuphi ukukhetha okulungile abakwenzile? Ngiyakutshela manje. Kuthiwani ngokuhamba phakathi nobhadane? Ngaphambi kokukhuluma ngeCosta Rica…
Funda kabanzi ICosta Rica Izwe elenze kahle!
I-United Kingdom, Umhlaba wetiye le-5am nendawo okumele ungabi sekwephuzile!
Namuhla sizokhuluma nge-UK, izwe elaziwa ngetiye lango-5: 00 ntambama, futhi ungaphuzi ukufika lapho! Ukufika eLondon ngivela eHeathrow International Airport ohambweni lwami lokuqala lokuya e-UK, kwasevele kungenzeka ukubona okuthile okuhle kakhulu kubavakashi. Isikhumulo sezindiza sixhunywe esitimeleni. Futhi kuphi…
Funda kabanzi I-United Kingdom, Umhlaba wetiye le-5am nendawo okumele ungabi sekwephuzile!
IBelgium - izwe elifanele ukufunda amahlaya, ngenkathi iphuza ubhiya futhi idla ushokoledi
Namuhla sizokhuluma ngeBelgium, izwe eliphathelene namahlaya, ubhiya noshokoledi. Ngiyethemba ukufundwa kuyajabulisa! Ekugcineni sizoba nokumangala (kumaBrazilians kuphela, okwamanje). I-Antwerp - inhlokodolobha yedayimane Indawo enhle yokufika eBelgium. Uma kungenzeka, ngincoma isitimela, ngoba vele ku…
Funda kabanzi IBelgium - izwe elifanele ukufunda amahlaya, ngenkathi iphuza ubhiya futhi idla ushokoledi
Mingaki imiklomelo kaNobel efanele umama wakho? - Umndeni wakwaCurie wasungula okungenani ama-2 - iPoland neFrance
Ngalolu Suku Lomama ngithanda ukuphakamisa lo mbuzo: Mingaki Imiklomelo kaNobel umama wakho ayifanele? Ngicabanga ukuthi ngokusinikeza isipho sempilo, usevele ufanele omunye, omunye uza ngokusisekela size sibe nesibindi futhi sihambe ngezinyawo zethu. Yebo, umndeni wakwaCurie usungule okungenani okungu-2…
Funda kabanzi Mingaki imiklomelo kaNobel efanele umama wakho? - Umndeni wakwaCurie wasungula okungenani ama-2 - iPoland neFrance
Kungani izinkampani zaseBrazil kufanele zihambisane nomqondo we-ESG - Environmental Social Governance, nokuthi ungazuzisa kanjani wonke umuntu.
Kuyini i-ESG? Umqondo we-ESG ukulingana phakathi kwe-tripod: Ezemvelo, Ezenhlalo kanye Nokulawulwa Kwebhizinisi. Kule mibuzo singabonisa ukuthi kanjani: Ezemvelo: Umbuzo wezemvelo ufaka phakathi: ukuguquka kwesimo sezulu, izinsiza zemvelo, ukungcoliswa kwendle, imfucuza kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo. Okomphakathi: Ngokombandela womphakathi singagqamisa: amandla womuntu, amathuba omphakathi,…
Funda kabanzi Kungani izinkampani zaseBrazil kufanele zihambisane nomqondo we-ESG - Environmental Social Governance, nokuthi ungazuzisa kanjani wonke umuntu.
Uhambo lokuqala oluya e-Austria - Izwe eliguqule umhlaba jikelele - iVienna
Ukusizakala ngokuhlukaniswa (ngenxa ye-COVID-19) ukuvuselela ibhulogi. Khumbula, uma uzophuma, gqoka imaski, uma ungagonywa futhi uthobele imithetho yezempilo. Sesikushilo lokho, ingabe sizovakashela i-Austria? Ilukuluku Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi e-Austria ulimi oluyinhloko isiJalimane. Kepha yeka…
Funda kabanzi Uhambo lokuqala oluya e-Austria - Izwe eliguqule umhlaba jikelele - iVienna
ENetherlands? Izinga eliphakeme nokwehluka kweHolland
Futhi sisebenzisa ukwahlukaniswa, ake sibuyekeze le bhulogi kancane. Umqondo omuhle ukubuyekeza leyo albhamu yezithombe. Futhi uyibuyekeze, okungenzeka ukuthi yayiyi "uhambo oluya esikhathini esizayo", nasemkhathini wamasiko! Yebo, namuhla sizokhuluma ngeHolland, izwe elifundisa kakhulu cishe kuzo zonke izifundo. IHolland…
Funda kabanzi ENetherlands? Izinga eliphakeme nokwehluka kweHolland
Uhambo lokuqala oluya eLithuania - eVilnius - Ukubona abangane abahle
Yini eyangihlaba umxhwele kakhulu? Ukuhlangana nomngani wami waseBelarus, owathi, noma ekhulelwe, weqa umngcele ukuze nje abuye abone umngane wakhe wakudala waseBrazil, lokhu kwaba yinto ehlukile. Futhi wayeseletha izipho eziningi! Iphini nekhadi leposi elivela eMinsk, namanye onodoli baseBelarus ngenhlanhla (Oh namakhukhi…
Funda kabanzi Uhambo lokuqala oluya eLithuania - eVilnius - Ukubona abangane abahle
Faka i-imeyili yakho ukuze ubhalisele le bhulogi bese uthola izincwadi ezintsha.
por I-Pro theme Design
Joyina 240 nezinye ababhalisile